musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Australia Kuputsa Nhau » Kirabhu Wyndham Flynns Beach Resort yakapetwa kaviri saizi
Australia Kuputsa Nhau • Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Resorts
Kirabhu Wyndham Flynns Beach yakagadzirira kuunza vamwe vafambi kunzvimbo yePort Macquarie. Port Macquarie iguta riri mumahombekombe munharaunda yemunharaunda yePort Macquarie-Hastings. Iyo iri paMid North Coast yeNew South Wales, Australia, anenge 390 km kuchamhembe kweSydney, uye 570 km kumaodzanyemba kweBrisbane, Australia.
Kirabhu Wyndham Flynns Beach kusimudzira yakawedzera makumi mashanu nematatu kusvika kumana-emakamuri ekurara mana, makumi maviri akasarudzwa saDeluxe, makumi maviri nemashanu saGogo, uye vasere seMutungamiri. Iwo mana-emakamuri ekurara Presidential villas, kunyanya, akagadzirwa sechinhu chisingaenzanisike mukati medunhu, iine mana akapamhama emakamuri, dzimba dzekugezera ina, kicheni izere, nzvimbo dzekuwachira, pega pevhu pevhu pekunze spa, uye hombe yepamusoro bhokoni , uye yepamusoro fittings uye apedza.
Kwemakore angangoita maviri, iyo $ 25 mamirioni budiriro yakapa basa kune vatengesi mazana maviri nemakumi mairi uye nyanzvi uye vakawedzera pekugara kweiyo resort kune 220 mafurati uye dzimba. Iyo purojekiti yakaonawo kugadzirwa kwekofi nyowani, nharaunda yemitambo, dziva revana, zvakajairika nzvimbo pavilion uye kupaka mota, pamwe neyakagadziridzwa yekurovedza muviri uye kugadziridzwa kwekugamuchira.
"Izvi zvisati zvaitika uye COVID-19 denda, nzvimbo yekutandarira yainakidzwa neanopfuura 90 muzana paavhareji uye yakapa mari inofungidzirwa kuva $ 20 miriyoni pagore kuhupfumi hwenzvimbo iyi zvakananga kana zvisina kunangana kuburikidza nekushandisa kwevaenzi - nhamba yatiri kutarisira ikozvino kuwedzera, ”akadaro Barry Robinson, Mutungamiri neManaging Director, International Operations of Wyndham Destinations.
"Nekuwedzera pekugara pekutanga, kugadzira zvivakwa zvitsva uye nekuvandudza zviripo, tinotenda zvichakwezva kudiwa kukuru kwenzvimbo yedu yekutandarira uye, mukuita kudaro, kusimudzira runako rwePort Macquarie, iyo ichapa kukurudzira kune post-COVID yenharaunda." -19 kupora. ”
Iyo purojekiti yakatanga muna Chivabvu 2019 asi musimudziri, Wyndham Destinations Asia Pacific, akafunga kufambira mberi nemabasa panguva ye COVID-19 denda aine tarisiro yekuti nzvimbo yacho ichapora zvizere.
"Iyi budiriro yemadhora anodarika makumi maviri nemashanu emadhora inoratidza chivimbo cheWyndham Destinations muPort Macquarie Hastings senzvimbo inotungamira yekushanya kuNew South Wales," akadaro Meya Peta Pinson.
“Chirongwa ichi chakapa kukurudzira kwehupfumi kwakatambirwa zvikuru nenharaunda yedu, mabasa emuno nekukwezva vashanyi vedu. "Uku kuwedzera kukuru kudunhu redu, takabatana nezvirongwa zvemamirioni emadhora zvatiri kuona panguva ino."
Kirabhu Wyndham Flynns Beach iri paMid North Coast yeNew South Wales, ingori awa-imwe ndege kana maawa mana kutyaira kubva kuSydney. Iyo inopa akawanda ezviwanikwa, emhuri-ane hushamwari marongero uye anoyemurika kuhaya ehuwandu hwenzvimbo yekunze zvishandiso nemitambo.
Kirabhu Wyndham South Pacific inotarisirwa neWyndham Destinations Asia Pacific, chikamu